ဘဝမှတ်တိုင်: ဓါတ်ပုံတွေကိုအကောင်းဆုံးပုံတွေရရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Perfectly Clear v 2.5.3 full APK
ဓါတ်ပုံတွေကိုအကောင်းဆုံးပုံတွေရရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Perfectly Clear v 2.5.3 full APK
ဓါတ်ပုံတွေကိုပြုပြင်ရတာ ၀ါသနာပါသူများအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမယ့် Perfectly Clear v2.5.3 ဆိုတဲ့ Application လေး တစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ရုပ်ထွက်မကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ပိုမိုကောင်း မွန်လာအောင် (ကြည်လင်ပြက်သားမှုရှိလာအောင်) အတက်နိုင်ဆုံး ပြုပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
အခု Application လေးက ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးသားပုံတွေကို မိမိ လိုချင်တဲ့အနေအထားပုံစံ မျိုးဖြစ်အောင်ပြု ပြင် ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Photo နဲ့သက် ဆိုင်တဲ့ Effect တွေ လည်းမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။ Android O/S : 2.3.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဗျာ။ အောက်မှာလည်း နမူနာကြည့်နိုင်အောင် Screen Shoot လေးတွေရိုက်ပြီးတင်ပေးထားပါတယ်။
This is your chance to get this great new app from an award winning software company. Perfectly Clear will transform you Android photos from mere snapshots into stunning memories.What's in this version : (Updated : Apr 30, 2014)
major release, lots of amazing stuff you’re going to love! New app icon Designed to visually convey what Perfectly Clear is all about More here: http://goo.gl/6cUgyA
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 4/30/2014 05:41:00 am